Maamul Goboleed ma leedahay ? (Qormo tusaaleyn ah) - BAARGAAL.NET
Maamul Goboleed ma leedahay ? (Qormo tusaaleyn ah)
✔ Admin on June 09, 2011
Qaabka ugu sahlan ee lagu asaaso maamul goboleed (Qormo tusaaleyn ah) – Reerkaaga maamul la’aan ma yahay? Beeshiinu ma ballaarantahay? Bad iyo webi ama leedahay? Balag iyo bandiiro la’aani ma jirtaa? Haddii ay jawaabta su’aalaha kore ama mid ka mid ah ay “Haa” tahay waxaan kuugu bishaaraynayaa in qoraalkan aad si wacan uga Faa’iidaysan
Haddaba si aad utoosido mudanaha dahsoom ee gudahaaga ku jiro si taxadar leh u akhri qoraalkan.
Qof kasta oo doonaya in uu haatan sii ooto goofkii awowgiis, si uu gorgortamo amaba birito markii ay dowlad loo dhanyahay timaado duq-magaalo tuuladii isu soo taago.
Waxba!. Adigoon is dhibin, duullaan anan qaadin, cidna dhaawicin, cudud ciidan iyo caddeyn lahaasho midna aan u baahan, waxaa suuro gal ah in aad Maamul-Goboleed kuu gaar ah aad yeeltid.
Haddaba si aad ugu guuleysato qorshaha madaxtinimo ee aasaaska Maamul-Goboleedkan waxaa muhiim ah in aad si taxadar leh u fulisos tallabooyinkan soo socda.
Run ahaantii magac u helista Maamul-Goboleedyada maanta arin adag ma ahan, waxaaba ay dadka qaar ay ku doodayaan in ay ka sahlantahay magac u helista ilmaha dhallaanka ah, waayo berigii hore curad wuxuu ahaa Maxamed(lab) ama faadumo(Dhidig).
Maantase waa laga tagay dhaqankaas, sidaas daraadeed way adkaatay in boqolaalka magac ee Carabiga, Turkiga iyo kuwa aan asalkooda la aqoon meesha ay ka soo jeedaan aad uga dooratid dhallaankaaga mid ku habboon.
Hayeeshee magac u helista Maamul-Goboleeyada ayaa ah arin aad uga sahlan arinka kore(Magac u helista dhallaanka). Waliba wan aad qasho iyo wadaad aad u yeertaa midna uma baahnid.
Haddaba si aad magac ku habboon maamulkaaga aad u heshid waxaa muhiim ah in aad raacdid hannaanka magacaabista ugu habboon baahidaada.
Hanaan Ingiriisiga ah oo ku dhisan magaca gobolka ama tuulada oo lagu lamaano Ereyga “Land”.
Waxaa la ogaaday in uu hannaankan ka fudud yahay kuwa kale ee aan hoos ku sheegi doonno, waayo wuxuu hannaankan uga duwanyahay kuwa kale iyadoo la adeegsanayo luqad caalami ah(Cantaranashnaal). Hannaankan ah kii ugu horeeyay ee la adeegsado tan iyo goortii uu gooni-isu-taagga ka dillaacay geyigeenu. Si aad hanaankaan u adeegsatid waxaad marka hore u baahantahay magaca ka tarjumaya deegaanka/gobolka/tuulada+land. Tusaale :-
Hannaanka labaad ee magacaabista ayaa ah mid ku saleysan carabeynta, inkasto oo uu midkani yahay mid ugub ah oo aan sidaas u shaac bixin haddana waa hannaan aad u sahlan, waxa kaliya ee aad u baahantahayna waa magaca Tuulada/Gobolka+Islaamiya. Ha moogaan in aad magaca tuulada/gobolka ka hormarisid ereyga “Wilaaya”
2-Caleemo Saarka (Doorashada)
Xusuusnow, waxaan ka hadlayana waa Maamul adiga kuu gaar ah, sidaa daraadeed doorasho uma bahnid. Kaliya waxaad u baahantahay caleemo saaris. Si uu ugu ekaado mid loo dhanyahay waxaad u baahantahay dhowr qofood oo reeraha ah oo u jadbeysan hor’umarka beesha iyo tiro kale oo iska jecel joogista goobaha dabbaal-dagyada iyo munaasabadaha ka jiraan.
Haddii Tuulooyinka/Gobolada aad sheeganeysid ay yihin kuwo ballaaran isku day in aad isku darsatid koorka Siilaanyo iyo Koofida Shariif Xasan. Hadii uu maamulkaagu yahay mid laftaada ama jilibka reerkaaga uun mid ku kooban waxaa kugu filan Fotoshari gacmogaab ah nooca Geellaha Jabuuti ama koor gacmo gab ah sida kan Prof. Dalxa.
X-Cabitaanka waxaa kaaga baxaya 50$. Haddaan doonto buskud Soomaali soo raacsii, isnaaqalka yaad horay uga soo qaadan karaysaa.
Dadku sidii hore ma ahan macmacmaankana waa joojiyeen, xanuun kolestorool la yiraa yaa dillaacay.
W/Q: Mohamed Haji.